#YoTeCreoVZLA: Hetsika manapaka ny fahanginana ela momba fanararaotana ara-nofo ao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
"Tsy nisalasala mihitsy aho fa ho tonga ato Venezuela ny #MeToo."
Mpanoratra Melissa Vida, Laura Vidal, Romina Navarro, Gabriela Mesones Rojo Nandika (en) i Anthony Sutterman, Harentsoa Tsiky Rakotoson
Voadika ny 11 Mey 2021 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Esperanto , Español
“Manambara ny tenanay ho Mpikomy izahay”. Sary avy amin'ny vondrona feminisita Uquira, nahazoana alalana hatramin'ny fanovana.
Miverina miha-matanjaka kokoa ny hetsika “MeToo” any Venezoela ny taona 2021. Nampitombo ny hetsika “YoTeCreoVzla” (“MatokyAnaoAhoVenezoela”) ny onjam-piampangana vaovao. Nitombo tao amin'ny media sosialy tato ato ny feon'ireo niangana tamin'ny fanorisorenana, fanararaotana sy ny fanolanana tamin'ny alalan'ny fanehoana fanohanana amin'ny tenirohy #YoSiTeCreoVzla sy #YoTeCreoVzla. Vehivavy Venezoeliana marobe no manaiky fa nisy ireo mpitory teo aloha, saingy tsy noraharahiana loatra izy ireo hatramin'izao, ka mitarika fifohazana tampoka.
Nahazo vahana ny onja tamin'ny 20 Aprily 2021, tamin'ny famoronana kaonty Instagram @AlejandroSojoEstupro, izay manangona ireo fitoriana fanararaotana ara-nofo nataon'ilay mpiangaly mozika Alejandro Sojo. Efa voalaza fa nanao fanorisorenana i Sojo tamin'ny taona 2018 tamin'ny alalan'ny randram-baovao Twitter avy amin'ny kaonty “Libertad.” Nofafan'ny Libertad ilay randram-baovao volana vitsy taty aoriana, tototry ny hafatra maneso, manala baraka ary mankahala.
Araka ny voalazan'ny tranonkala Venezoelana Cinco8, namoaka fanambarana i Sojo ary nanakatona ny kaontiny Instagram tamin'ny 24 Aprily, ary maro ireo fiampangana nanomboka nipoitra teo amin'ny sehatry ny zavakanto Venezoeliana. Nipoitra ireo fijoroana vavolombelona manohitra ireo mpikambana ao amin'ny tarika hafa, anisan'izany ny Okills, Le Cinemá, ary Tomates Fritos. Saika niitatra tany amin'ny sehatra ara-kolontsaina manontolo avy hatrany ny fiampangana ny sehatra rock Venezoelana, maha-saringotra ireo mpanoratra, mpanao gazety, mpanakanto ara-maso, sy ny hafa.
Tamin'ny 28 Aprily, nisy ny fipoahana raha niampanga mpanoratra Venezoeliana malaza, Willy McKey ho nanao fanolanana teo amin'ny taona 2015 sy 2016 i “Pía“, fony izy 16 taona ary 36 taona i Willy. Nametraka lahatsoratra tao amin'ny Instagram miaiky izay nataony i McKey, ahitana lahatsoratra toa miaro ny zon'ny vehivavy, izay nahasarika fanakianana maro tamin'ireo vehivavy mpanaraka azy. Veronica Ruiz del Vizo, manam-pahaizana manokana amin'ny haino aman-jery sosialy sy haivarotra nomerika, nanao randram-baovao tao amin'ny Twitter manazava ny antony mahatonga ny olana amin'ny lahatsoratr'i McKey:
Fantatro fa tsy maintsy mamaky ity ianao @WillyMcKey. Fantatrao ny fifandraisantsika akaiky sy ny maha mpinamana. Miteny avy amin'ny asako aho, satria vaky fo aho androany.
Te hiteny ampahibemaso aho fa miahiahy momba ny paikadin'ny media sosialinao aho. Ny fisafidianana ny loko amin'ny lahatsoratrao.
Io tolakandro io ihany, rehefa nahazo taratasy fampisamborana iraisampirenena izy taorian'ny fiampangana ny fanararaotana ara-nofo, dia maty namono tena tany Buenos Aires i McKey. Nangataka ireo mpiserasera tao amin'ny media sosialy mba hampifantohana ny tantara amin'ireo sisa velona fa tsy amin'ilay nahavita heloka.
Mandritra izany, dia matahotra ny vehivavy Venezoeliana sasany ny mety ho famadihana ho politika ny fitarainana noho ny tanjona politika. Ohatra, ao amin'ny firenena izay mahazatra ny fampielezan-kevitra manakorontana sy manaratsy mpanao gazety, nanokatra fanadihadiana tamin'ireo mpanao gazety ny Biraon'ny mpampanoa lalàna Venezoeliana. Ny tranga tena manandanja dia ny famotopotorana an'i Víctor Amaya, tale tonian-dahatsoratry Diario TalCual, sy César Batiz, talen'ny media tsy miankina El Pitazo, notononin'ny kaonty tsy fantatra anarana izay, hatreto, dia tsy nahasarika fitarainana mivantana sy voaporofo kokoa. Nanasonia fanambaràna mandà ny fiampangana an'i Batiz ireo mpanao gazety avy ao amin'ny El Pitazo, ary nanao izany koa ho an'i Amaya taty aoriana ireo mpanao gazety avy ao amin'ny TalCual. Manoloana ireo tranga roa ireo, dia mangataka amin'ny governemanta ny vahoaka mba tsy hanararaotra ny hetsika hanenjehana ireo mpanohitra.
Mpiaro vehivavy Luisa Kislinger nanintona ny saina momba ny zava-misy fa mbola tsy tonga any Venezoela ny #MeToo, mandraka androany:
Tsy nanana fisalasalana mihitsy aho hoe ho tonga any #Venezuela ny #MeToo amin'ny fotoana iray.
Ary tonga izany.
Ho an'ireo izay mangataka “famelana heloka”, azafady mba fantaro fa tsy mahasolo ny andraikitra tamin'ny heloka bevava natao izany
Ho an'ireo niharam-boina maherifo sy tafavoaka velona izay nitantara ny tantaran'izy ireo, manohana anao aho [mino anao aho]
Mpanao gazety Oscar Medina namaly ireo mpitsikera izay milaza fa tsara kokoa noho ny manao fiampangana ampahibemaso ao amin'ny media sosialy ny fametrahana fitoriana ao amin'ny rafi-pitsarana ao amin'ny firenena. Nanazava izy fa tsy manana fahaiza-manao na finiavana ara-politika hanampy amin'ny fahamarinana ny fanjakana Venezoeliana. Na dia nandany fanavaozana lehibe manohitra ny herisetra eo amin'ny lahy sy ny vavy tamin'ny taona 2018 aza ny mpanao lalàna, mampiseho taratra ny tsy fisian'ny finiavan'ny andrim-panjakana hampihatra izany ny tsy fampiharana azy io:
Rafitra ara-dalàna sy ara-pitsarana iza no ho iray handefasan-dry zareo ny lasibatry ny fanararaotana fa tsy manao fitarainana ampahibemaso? Haitraitra inona no iainan'izy ireo? Tena mino ve izy ireo fa afaka miantehitra amin'izany ny lasibatry ny fanorisorenana na fanolanana?
Mpanoratra Oriette D'Angelo naneho hevitra momba ny tsy fahampian'ny fiheveran'ny haino aman-jery ireo fiampangana voaray taloha:
Ny sasany amintsika vehivavy eo amin'ny tontolon'ny literatiora Venezoeliana dia efa niteny nandritra ny TAONA MARO momba ny fanararaotana nihatra tamintsika teo am-pelatanan'ireo mpanoratra/mpampianatra eo amin'ny tontolontsika.
Eto aho dia mamela randram-baovao amin'ny sasany amin'ireo fiampangana sy fanambarana an-gazety nivoaka tato anatin'ny taona vitsivitsy:
Nameno ny aterineto tato ho ato ihany koa ohatra ny fitoriana natao tamin'ireo profesora, tahaka ity avy amin'i Valeria Maza ity momba ny profesora iray tao amin'ny Universidad Santa María (USM) any Caracas:
Androany aho dia manameloka an'i Rogelio Diaz, ilay mpanorisory mpianatra USM marobe. Mpanao politika ao amin'ny COPEI [Antoko Kristiana Sosialy any Venezoelà] ity lehilahy ity izay miafina ao ambadiky ny lahateny feminista sy lehilahy mahafinaritra kanefa mangataka sary mitanjaka amin'ireo mpianany te-hahomby amin'ny fianarana.
Mikasika ny famonoan-tena nataon'i McKey, mpiserasera maro no nanantitrantitra fa tsy tompon'andraikitra tamin'ny fihetsiny ireo lasibatr'i McKey. Ny sasany, toa ilay mpanao gazety Mariel Lozada, nitaky ny hifantohan'ny fitantarana amin'ireo niharam-boina:
Aza adinoina ny zava-misy. Aza avelantsika hitodika any aminy ny fitantarana. Aza hakiviana ireo vehivavy izay sahy niloa-bava ihany nony farany.
Nasongadin'ilay mpampanoa lalàna Beatriz Borges fa olana ara-piarahamonina ny machismo (lehilahy miseho mafy):
Rehefa lasa hita maso ny herisetra mifototra amin'ny fanavakavahana sy ny tsy fitoviana, dia rehefa tsapanao fa tsy mampihomehy anao ny vazivazy ara-nofo, fa mampiseho taratra fiarahamonina manome rariny ny herisetra fotsiny. Mametraka azy amin'ny tena halaliny ny fihainoana ireo fijoroana vavolombelona mampanaintaina. #YoSiTeCreo
Tao amin'ny media sosialy, naneho ny ahiahiny momba ny fanakanana mitsitapatapaka ny farangoteny #YoSiTeCeCreo ao amin'ny Facebook ihany koa ireo mpiserasera isan-karazany:
Nosakanan'ny Facebook vonjimaika ny votoaty ahitana tenirohy #YoSiTeTeCreo any amin'ny firenena Amerikana Latina maromaro, toa an'i Venezoela, Arzantina ary Shily.
Mpanao gazety sy mpandray anjara ato amin'ny Global Voices Gabriela Mesones Rojo, tahaka ny maro, no niombom-pihetseham-po tamin'ireo vehivavy nanameloka ampahibemaso ireo izay nampijaly azy ireo, ary nizara torolalana fanampiana ara-psykôlôjia (ara-tsaina) sy ara-pitsarana ho an'ireo lasibatry ny herisetra mifototra amin'ny lahy na vavy:
Tsy manana teny hanehoana ny hatezerana tsapako aho. Ny fangorahako feno amin'ireo niharam-boina tamin'i @WillyMcKey. Misaotra azy ireo aho tamin'ny herim-po sy ezaka tamin'ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo.
Matoky anao izahay, tsy irery ianao, ho sitrana ny ratra.
Misy ny laharam-pifandraisana ho an'ireo lasibatry ny herisetra eo amin'ny lahy sy ny vavy. Tsidiho ity lahatahiry misy ny tolotra fanampiana ny lasibatra ao Venezoela ity, laharam-pifandraisana any Amerika Latina, Azia, sy Eoropa, ary ny drafi-piarovana ny herisetra an-tokantrano Misy ihany koa fanampiana ho an'ny risika famonoan-tena sy ny krizy ara-pihetseham-po. Tsidiho ny Befrienders.org raha hijery laharam-pifandraisana fisorohana ny famonoan-tena ao amin'ny firenenao.
MpanoratraGabriela Mesones Rojo